Qgis - ngwugwu ngwugwu nke dabere na ubi nke igodo cadastral - Geofumadas
Qgis - Akwukwo ngwugwu nke dabere na ubi nke igodo cadastral
Septemba, 2015 cadastre, qgis
Enwere m atụmatụ nke obodo, ya na nkọwa nke igodo cadastral n'ụzọ dị otú a:
Ngalaba, Obodo, Ngalaba, ihe onwunwe. dị ka, na nomenclature mejuputara dika egosiri na onyonyo: Ihe omuma: 0313-0508-00059
Ọnọdụ a bụ na enwere m mmasị ị nwere ike ịkọwapụta atụmatụ ndị ahụ dabere na agbụ nke abụọ, nke bụ ebe ngalaba ahụ (0508) guzobere. Yabụ, ịnwere ike ịnwe njirimara nwere agba dị iche, dabere na ngalaba ahụ akọwapụtara na koodu cadastral gị.
O doro anya na e nwere ụzọ iji mee ka ọ dịkwuo elu, ma na nke a, kọwaa ụkpụrụ ahụ site n'iji ha na-eme ihe site na iwu.
Right pịa na oyi akwa ka thematize, họrọ Njirimara. Mgbe ahụ n'ụdị, họrọ "Dabere na iwu"
N'ebe a, ịmepụtara iwu ọhụrụ, jiri okwu na-emepụta ihe, họrọ site na Ubi na Ụkpụrụ, ubi CLAVECATASTRAL, na-egosi na ị na-agwa m:
Ndị niile ebe eriri na-agụnye igodo cadastral ruo 0508 (0313-0508-)
Ya mere na eriri bụ «KEYWORDS» dị ka '0313-0508-%' Ihe nnọchianya% bụ ka ọdịnaya ahụ ghara ibubata site na mgbe ahụ gawa.
M na-akọwa ọtụtụ iwu dịka ngalaba m chọrọ ị were. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghịzi mkpa iwu ha dịka nke mbụ, mana naanị idetuo / mado ajụjụ ahụ wee gbanwee mpaghara mpaghara ahụ. A kọwapụtara agba agba maka onye ọ bụla n'ime ha, dị ka e gosiri na foto na-esonụ.
N'ihi nke a, anyị ga-enwe map nke ịkwado ha na-adabere na mpaghara mpaghara (Mpaghara ma ọ bụ Map ka a na-akpọ critics a).
E nwere ike ịchekwa ụdị ahụ maka ngwa gị n'oge ọ bụla.
Previous Post«Previous Nguzobe nke ezigbo ala na ulo oru nke ndi oru
Next Post Akwụkwọ Akụkọ Bentley Latin AmericaNext »